Ini ndiri musikana ane makore 21 ndinotsvagawo murume ane makore 25 | Kwayedza
Ini ndiri musikana ane makore 21 ndinotsvagawo murume ane makore 25
15 May, 2015 - 00:05	 2015-05-15T01:56:25+00:00 2015-05-15T00:00:09+00:00 0 Views
NDINOKUTENDAI veKwayedza ndakazomuwana wandaida saka vose vachiri kufona pa0778 002 994 chiregai henyu.
Ndinokumbirawo kuti vachiri kufona pa0778 002 994 vachirega nekuti ndakazomuwana wandaitsvaga.
Ndinokutendai veKwayedza, ndakamuwana wandaida saka vaifona pa0773 170 066 chiregai henyu.
Makadii? Ini ndiri mukadzi ane makore 39 nemwana mumwe chete uye ndinodawo murume anoda mukadzi wekuroora kwete varume vanonakidzwa nekufona muine vakadzi venyu kudzimba dzenyu muchindipedzera nguva yangu. Ngaave anoshanda, akavimbika nekuti ndakambonyorera ndikapedzerwa nguva yangu saka chokwadii ndapota zvangu vaye vanoda zvekutamba siyanai neni. Ndinoda murume ane makore 41 kusvika 60 anoziva Mwari. Ndiri HIV positive, ndapota taurai chokwadii ndinodawo kuvakawo imba yangu. Vanoda ndibatei pa0715 885 614.
Ndiri musikana ane makore 21, ndiri kutsvagawo shamwari (penpals) uye ndiri mwana wechikoro. Ndinonamata saka ndodawo vanonamata. Vanoda mondibatawo panhamba idzi 0778 818 559.
Ndinotsvakawo mukadzi akavimbika wekuroora ane makore 30 zvichikwira ane mahips. Ndine makore 38, nhamba dzangu 0779 405 177.
Ndiri mukomana ane makore 36 ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 36 chero mukadzi ane mwana 1. Ndiri kuMarondera, nhamba dzangu 0779 352 098.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37 ndinodawo shamwari (penpal) dzechikadzi dzine makore 25-40 . Ngavave vari kwaMurewa, Mutoko neNyamapanda. Vanoda ngavandibate pa0779 511 971 asi ndinoda vari paWhatsApp chete.
Makadini? Ini ndiri musikana ane makore 21 ndinotsvagawo murume ane makore 25 kusvika 30 ari pachokwadi. Ngaave anoshanda nekuti ini ndinoshandawo. Vanoda zvekutamba musafone, nhare yangu 0776 283 725.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinodawo musikana ane makore 18 zvichidzika ari pachokwadi asi asina chirwere. Vanogara muHarare chete ndifonerei pa0714 829 663.
Ndiri mukomana ane makore 20 anotsvagawo musikana wekuroora. Ndiri nherera, ndiri kuita zvidzidzo zvehudzidzisi kuMasvingo. Vanoda ndibatei pa0775 556 338.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21 asina mwana ari pachokwadi nekuwanikwa. Nhare yangu 0774 949 902.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana 1, ndinoshanda mubhawa uye uye ndiri HIV+. Ndotsvagawo murume ari pachokwadi ane mwana 1 anoda zvekuroora anoshanda ari HIV+ sezvandiri. Afarira ngaafone pa0776 575 566.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 25. Ndiri pamusha, nhare yangu 0778 279 977.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 20 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 -20. Ndinoshandira muHarare, nhamba yangu 0783 020 563.
Ndiri mukomana akanaka ane makore 26, ndiri HIV negative uye ndinotsvagawo musikana akanaka seniwo ane makore 18 kusvika 22. Ndinoda ane tsika nehunhu pamwe nemazirudo. Anoda kuroorwa ngaandibate pa0775 964 807.
Makadii mose? Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana ane makore ari pasi pe23 wekushamwaridza naye. Anoda ngaandibate panhamba 0772 264 737.
Ndiri mukomana ane makore 31 okuzvarwa uye ndinotsvakawo musikana anovimba naMwari, anogara akashambidzika nguva dzose. Ari pachokwadi nezvemba aine makore 20-22 ngaandifonere pa0782 677 762.
Ndiri murume ane makore 36 ndinodawo mudzimai ane makore 30 zvichidzika ari mutsvuku anogeza uye ari HIV negative. Anoda ngaandibatewo panhamba dzinoti 0776 228 812.
Ndiri murume wechidiki asati amborora ane makore 25 ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 23. Ngaave anoda zvemba ari pachokwadi. anonamata. Ini ndozviitira zvinhu zvangu, vanoda ndibatei pa0774 241 425.
Ini ndiri mukadzi ane makore 25 nemwana mumwe chete uye ndinotsvagawo murume kana mukomana ane makore 26 kusvika 35. Fonai kana kutumira sms pa0783 752 527.
Ini ndiri murume ane makore 32 okuberekwa nemwana mumwe chete, ndinoshanda uye ndinonamata. Ndakasimba asi ndiri HIV+, ndinotsvagawo mukadzi kana musikana chero ane wake mwana ane makore kubva 23 – 29. Ngaave ane rudo, anonamata uye akavimbika. Ndibatei paWhatsApp kana kutumira sms pa0771 598 728.
Ndiri mudzimai ane makore 34 nemwana mumwe chete, ndiri HIV positive uye ndiri mucross-border. Ndinotsvaga murume ane makore 36 – 46 ane utachiona seni. Anondibata pa0771 516 965.
Ndiri Madzibaba Venguwo Tsvuku, ndine makore 31 nemwana 1 uye ndiri HIV negative. Ndinodawo mudzimai ari pachokwadi ane mwanawo 1 kana asina anonamata positori chero asinganamate ane makore 19 kusvika 24. Ndinoshanda kumugodhi kuZvishavane asi kumba kwedu kuNorton. Nhamba dzangu idzi 0777 234 816.
Ndiri murume ane makore 34 ndotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 23 kusvika 34. Ngaafone pa0779 993 572.
Ndiri kutsvagawo murume ane mufaro mumba, ndine makore 40 ekuberekwa asi handidi vanotamba neni. Ndibatei panhamba idzi 0783 896 936.
Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 20-24 anoshanda. Ini ndiri mukomana ane makore 24 ndinoshanda basa rehudzidzisi kwaMutare. Ndinoda vanogara pedyo neMutare zvisingazonetsi pakuonana. Kana mukadzi anoshanda ane mwana mumwe chete ndinomuda asi ngave ane makore andareva. Anoda nezvangu ngandibate panhamba dzinoti 0782 957 078.
Ndiri mukadzi ane makore 25 nevana 2 uye ndinoda murume ari HIV negative ane makore 28-36. Nhare yangu 0783 872 352.
Ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23, ndiri mukomana ane makore 22. Nhare yangu 0783 707 256.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mukadzi vekushamwaridzana naye ane makore 20 – 25 anozivawo mabasa emawoko. Anoda ndibate pa0776 476 680.
Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 24 -18 ari HIV negative. Ndine makore 25 uye ndinoshanda. Anoda nezvangu anofona pa0773 339 080.
Ndiri murume ane makore 45 nemwana mumwe chete, ndinoda mukadzi asina hosha akanakawo. Vanodawo ndibatei pa0775 031 176.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 okuberekwa, HIV positive uye ndinoda mukadzi ane makore 20 kusvika 40. Ndinoshanda basa riri nani chose, ndinoda murefu mutsvuku akanaka uye akarongeka. Anovimbika ngaandibate pa0772 305 889 asi kwete macall me back.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 20 ari pachokwadi, ane rudo ari HIV negative. Ngaatumire sms pa0777 731. 003.
Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvaga mukadzi anoda zvemba asina chirwere ane makore 30 kusvika 28. Ndinogara kwaNyika kuBikita, nhare yangu 0778 158 644.
Makadii henyu? Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 19 mutsvuku, anogeza. Andifarira nhare yangu 0776 165 893.
Ndiri murume ane makore 34, HIV positive ndinotsvaga mukadzi ane makore 22-30. Ndogara muHarare ndichiita basa rekutengesa. Vandifarira nhare yangu 0773 076 696.
Makadii veKwayedza? Basa munogona, ndiri mukomana ane makore 23 uye ndiri HIV negative. Ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 21. Andidawo anofona kana kutumira sms pa0782 414 917.
Ndiri mukomana ane makore makumi maviri ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore gumi nematanhatu kusvika pamakumi maviri. Ndinoda anogara kwaMutare, ngaandifonere kana kutumira sms pa0776 094 016.
Ndinotsvaka musikana wekuroora ndine makore 33. Nhamba yangu 0783 388 387.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana wekuroora akatsiga ane makore 18 – 19. Nhare yangu 0718 068 932 asi fonai panguva yelunch time.
Ndiri murume ane makore 26 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 18 kusvika 25 asina mwana uye anoenda kuchechi. Ngaave akanaka, mushava anofarirawo kugeza. Ini ndiri mushava hangu, nhare yangu 0779 173 338.